Osimiri kacha mma na Vietnam, chọpụta ha | Akụkọ Njem
Osimiri kacha mma na Vietnam
Susana Garcia | | Asia njem, Vietnam
Tupu ịmalite ụzọ anyị ọ dị mkpa ịmara ụfọdụ ozi bụ isi, ị naghị eche? Ọfọn, nke mbụ anyị ga-ekwu na Vietnam nwere ogologo ala na ụsọ mmiri dịgasị iche iche na mpaghara dị iche iche ihu igwe, na nke a na-enwekarị mmiri ozuzo.
Ọ dịkwa mkpa ikwu nke ahụ osimiri kacha mma na mba ha na-adịkarị na mpaghara ndịda. Ọzọkwa, ọ dị mma ịmara na oge kachasị mma iji hụ ụsọ osimiri Vietnam bụ site na Disemba ruo Mee. N’oge a ị ga-ahụ ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ nke ukwuu, na-enwe obere mmiri ozuzo.
Na ntụle, oge opekata mpe iji nwee obi ụtọ n'ụsọ osimiri Vietnam bụ n'etiti Julaị na Ọktọba ebe ị nwere ike ịchọta ọnụnọ nke mmiri ozuzo na oké ifufe ma kwa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị njem nleta n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe obi ụtọ n'oge ezumike ha n'oge a. Ozugbo amatara nkọwa ndị a niile, anyị nwere ike ịbanye n'ime osimiri kachasị mma na Vietnam.
1 Osimiri China
4 Hon Chong osimiri
Osimiri China bu osimiri dị n'etiti Danang na Hoi An. Osimiri a ka ndị agha North America họpụtara n'ime afọ iri nke afọ 70 mgbe ọdịda nke ndị agha ahụ mere, ndị jiri aha a mara ya. N'ezie ndị obodo na-akpọ ya Non Nuoc.
Ọ bụ nnukwu iri-atọ kilomita ala ajaỌ bụ ya mere o ji bụrụ ọtụtụ mmadụ. Ugwu dị n'ebe ugwu bụ Danang, n'akụkụ ndịda bụ Hoi An. N'akụkụ osimiri, e nwere ọtụtụ ebe ntụrụndụ ịnọ, ebe ọ bụ otu n'ime osimiri ndị njem kachasị njem.
N’akụkụ osimiri a ka enwekwara ọtụtụ ebe iji chọpụta. Enwere ọdụ ụgbọ mmiri na-adọrọ adọrọ nke Hoi An, ebe ị nwere ike ịhụ ndụ ndị bi na ya, ma ọ bụ chọpụta ọgba nke Phing Nga, ma ọ bụ obodo ukwu nke Hue.
Ugbu a, anyị ga-akwaga Nha Trang, nke a maara dị ka Vietnamese Riviera. Ọ bụ ezigbo ebe dị jụụ bụ ebe obibi nke ndị obodo nwere ezigbo enyi. Osimiri ahụ bụ aja ọcha na-acha oke ọcha, nke dị iche na-acha anụnụ anụnụ nke oké osimiri na ugwu ndị na-acha akwụkwọ ndụ na nkwụ ndị gbara ya gburugburu. Obi ga-atọ gị ụtọ ịmata na ị gaghị ahụ mkpọtụ ma ọ bụ mmetọ ebe a. Ebube! Kedu oge kacha mma iji gaa n'akụkụ osimiri a? N'etiti ọnwa Mee ruo Ọktọba.
Enwere ọtụtụ ebe nkiri na nke a ọmarịcha obodo mmiri, dị ka ọmarịcha mmiri ya. Agbanyeghị, oke osimiri ya na-adọta ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa sọọfụ ma ọ bụ banye na mmiri. Nnukwu nkwụsị iji nwee ọ aụ ezumike na ntakịrị obi iru ala.
Oge ileta Mui Ne Beach, emi odude ke akwa 20 nkeji ụgbọ ala si obodo nke Phan Thiet. Obi ga-atọ gị ụtọ ịmata na ụsọ osimiri a nwere ọmarịcha mma ma maa mma nke akwa aja. Pụrụ ịhụ ogologo dunes na shades sitere na whitish na ọbara ọbara, na a ọdọ na a iyi na-agba site na obere kaniyon na-acha ọbara ọbara mgbidi, otú ahụ gburugburu ebe obibi bụ nnọọ akpali.
Maka ihe a niile, a maara ya dịka otu n'ime osimiri kachasị mma na mba ahụ, ebe ọ bụ na ụlọ ọdịdị ala nke ahụ agaghị ekwe omume ịchọta n'ụsọ osimiri ndị ọzọ, dị ka a ga - asị na ọ bụ obere paradaịs.
Ga-achọ ịma na ọ bụ a 10 kilomita osimiri ndị na-akụ azụ̀ na-anọkarị n'oké osimiri, na-enye ọmarịcha ihe oyiyi. Na mgbakwunye, osimiri dị oke ikuku, nke na-eme kitesurfing kwesịrị ekwesị. Dare na-amaja?
Ọ dị mkpa ikwu na oge kachasị mma iji mata nke ọma bụ n'etiti Disemba na Mee. Agbanyeghị, ihu igwe dị ọkụ ma kpọọ nkụ n’afọ ọ bụla, na-enwe ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ nke 27 Celsius, ya mere a pụrụ ileta ya n’oge ọ bụla, karịsịa mgbe mmiri na-ezo n’akụkụ ndị ọzọ nke mba ahụ.
Hon Chong osimiri
Ka anyị gaa n'ihu na Hon Chong osimiri, nke anyị na-akwado ileta n'oge ọnwa nke Disemba ruo Mee. Osimiri a dị nso na ókè ya na Cambodia, ọ na-adọrọ adọrọ ma na-adọrọ adọrọ maka ndị di na nwunye. Aja ya dị nro na-acha ọcha na mmiri dị jụụ ga-eme ka ị ghara ịlaghachi n’ụlọ. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị na-agba ọsọ na mmiri siri ike nke ọtụtụ osimiri Vietnamese. Ebe kachasị mma iji mee egwuregwu dịka snọklị.
Anyị mechara sị goodbye na Phu Quoc Island. N'agwaetiti a, e nwere oke osimiri mara mma, nke yiri ka ọ na-abịa site na mpaghara ebe okpomọkụ, dị ka Bai Tam beach. Anyị na-akwado ka ị bịa n'ụsọ osimiri a n'oge ọnwa Disemba ruo Mee.
Obi ga-atọ gị ụtọ ịmata na Phu Quoc Island, o nwere ugwu, oke ohia na aja aja. N'aka ozo, ebe zuru oke maka ndi na-ahu ihe okike n'anya. Ọ bụ ebe enwechaghị erigbu, yabụ ị ga-eji ya mee ihe iji chọpụta akụkụ ya. Naanị ya nwere obodo abụọ, nke fọdụrụ bụ ahịhịa na-ekpo ọkụ na oke osimiri ebe ị nwere ike ịnọ jụụ ma dịkwa jụụ, nwee aja ọcha, nkwụ na ihe niile ịchọrọ mgbe ị na-aga n'akụkụ osimiri n'akụkụ adịghị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Vietnam » Osimiri kacha mma na Vietnam
VETETAM B P Paradaịs, ND, NA-ASING NA ASIA, NA-AKA NA-EGWU ,M F KWES (R ((Abụ m onye nlekọta) Ọ bụ obodo dị ebube na ị ga-eleta ya n'oge ọ bụla.
Kedu ememme ị na-aga? You nwere njikọ ọ bụla nke ị ga-esife m biko>)
Ndewo, anọ m na Nha Trang (anyị nọ na 27/6/2013) ọ bụ nnukwu obodo, mara ezigbo mma nke ọma na ọ fọrọ nke nta ka ọdịda anyanwụ, mana osimiri ndị a kọwara ebe a enweghị ihe jikọrọ ya na eziokwu "ugbu a".
Enweghị m ike ịchọta ụbọchị maka blọọgụ a mana mara na taa, ọ bụ osimiri na-eme mkpọtụ, juputara na ndị mmadụ yana akụkụ mmiri ya niile jupụtara na họtel 5-kpakpando dịka Sheraton. Naanị nke ahụ.
PS: Mui Ne, ọnụ ahịa dị oke ọnụ maka ihe niile. N'ebe a na Nha Trang super dị ọnụ ala, anyị nwetara ime ụlọ abụọ na fan na mmiri oyi maka dollar 5, aha ụlọ ndị ọbịa HONG DIEP.
Enwere onye taa n'ụsọ osimiri Vietnam, ugbu a, m nọ na Ankgor na m ga-eleta Halong Bay. Kedu osimiri ndị dị na Vietnam ka ị kwadoro?
Vietnam taa visa dijo
Ebe ndị a masịrị m nke ukwuu. Vietnam juputara na oke ebe nlegharị anya. Emeela m njem na nso nso a. Enwere m mmasị karịsịa itinye oge na Hanoi.
Zaghachi na Visa Vietnam Taa
Bali, agwaetiti kacha mma na Indonesia
Ihe kpatara ị ga-efu na Andalusian Western Coast (II)